UBRODY JENNER'S EX, UKAITLYNN CARTER, OKHULELWEYO KUNYE NOMNTWANA WOKUQALA - IINDABA
UBrody Jenner's Ex, uKaitlynn Carter, okhulelweyo onomntwana wokuqala
UKaitlynn Carter ulindele ukuba umntwana wakhe wokuqala kunye nesoka lakhe uKristopher Brock. Inkwenkwana eneminyaka engama-32 ubudala Iinduli: Inkwenkwezi eNtsha yokuQala yazisa umntwana wakhe malunga neminyaka emibini emva kokuqhekeka kuBrody Jenner kunye neenyanga ezili-12 emva kokuqala ubudlelwane noBrock.
UCarter wazisa ulwazi lomntwana wakhe othukileyo ngendlela ekrelekrele. Kwi-Instagram, wabelana ngesilhouette sokukhula komntwana njengoko wayemi emva kwesoka lakhe elinxibe iminqwazi ngelixa wayetyelele i-Esperanza Resort eMexico. Umseki we-Foray ongumququzeleli ubhale nje ukubekwa phezulu kwe-coronary emoji yentliziyo.
Unikezelo kufutshane nesibini uxelele Ukuzonwabisa ngokuhlwanje ukuba uCarter noBrock bonwabile malunga nokuba ukhulelwe kwaye babhukisha iphupha iBabymoon kwindawo yabakhenkethi eCabo ukuba bonwabe.
Bebenqwenela ukwenza into enye eyongeziweyo ngokulula bobabini babo kwangoko kunokuba babhengeze ulwazi esidlangalaleni, utshilo u-insider. Ukhathazekile malunga ne-spa e-Esperanza kwaye unqwenela ukuchitha iintsuku ezimbini ezonwabisa.
Iqela leenkwenkwezi zeCarter's The Hills ziye zaphendula ulwazi lomntwana wakhe kwi-Instagram.
Isisu esisikiweyo! ubhale UAudrina Patridge.
Asinakho ukujonga phambili kwi-Wyatt ukuba ne-pal entsha kraca! ubhale Umama ozayo u-Ashley Wahler. Ndinithanda nina nivuya kakhulu ngenxa yenu,
Yessssssss !!! yongezwa Omtsha wase Hills, uCaroline D'Amore, uyavuya ngabantu ababini endibathandayo. Awunakulinda uzalisekise encinci yakho. Nobabini niza kuba ngumama notata ogqibeleleyo! @iamfanlalisa @ kristopher.brock .
UKaitlynn Carter wayexhalabile malunga neClock yakhe yeBhayiloji xa wayekuBrody Jenner
Ifoto: GettyUBrody Jenner kunye noKaitlynn Carter.
Abathandi beeNduli banokukhumbula ukuba uCarter wayezama ukuzama ukuzala kwakhe ngexesha lokuqala lomboniso we-MTV xa wayenoJenner. Kwisiqeshana esithunyelwe ngu MTV , UCarter utyhile ukuba wayenomda wexesha lokukhulelwa owayesele elihambisile. Kwindawo, eyayifotwa ngo-2018, wachaza ukuba ngenxa kanina wayeneminyaka engama-25 ngalo lonke ixesha esenza ngabom ukuba angaba nabantwana bakhe ngelo xesha. UCarter uvumile ukuba uyadideka malunga nokuzala kwakhe njengoko wayesondela kwiminyaka yakhe yama-30.
Esi sibini sangaphambili khange sibonakale ngathi kwiphepha lewebhu elifanayo xa lifika apha ekucwangcisweni kwamakhaya. Jenner Usixelele iVeki nganye ukuba yena noCarter babengenawo umkhuhlane womntwana, nangona kunjalo babengaphikisani nokuba nabantwana bobabini kwaye banokuba balungile ukuba kwenzeke ngengozi.
Umfana kaCarter uKristopher Brock Ngaba nguMyili weFashoni
Ifoto: GettyUKristopher Brock ulungiselela umva weqokelelo leBrock kuyo yonke iVeki yeFashoni yaseNew York: Imiboniso kwiGalari II e-Spring Studios ngoFebruwari 9, 2018 kwisiXeko saseNew York.
UCarter ebe kwi-arelationship kunye noBrock ukusukela ngoMeyi 2020. Waye ngaphambili uxelele Ukukhutshwa kwePodcast ukuba isithandwa sakhe sinjalo kwisitayile, kwaye baninzi kakhulu rhoqo.
Eyona yeyona nto ingenamthungo, ubudlelwane obandayo, wayalela ipodcast. Andikaze ndibenolwalamano olwaluchanekile kwaye akukho mfuneko yokuba ndibeke omnye umntu phantsi, nangona kunjalo ndiziva ngathi ungoyena mntu ukhulileyo endakhe ndathandana naye. Ukhule ngakumbi kunam ngokude.
U-Brock usekwe kwileyibhile yeposi ye-posh Brock Collection ngo-2014 kunye nomhlobo wakhe oyilo uLaura Vassar, ngokuhambelana iwebhusayithi yebrand . Aba bayili babini batshata kwinyanga ezili-12 ezifanayo kwaye Vogue igutyungelwe umtshato wabo waseNewport Beach, eCalifornia. U-Brock wabelana ngonyana, uCharlie, kunye noVassar. Baqhawule umtshato kwi-2019.
Izigaba: Amazon-Prime Iindaba Iwiki
ngubani ikhephu elisekwe
Ngaba jake umgcini wesini
Katrina umthetho ophawuleka bhanyabhanya
kukuhlaselwa kwetitan kwi-hulu
abaphumeleleyo ilizwi ngokuhlwanje